सिभिल मलका व्यापारीहरुले लकडाउन अवधिको पूरै भाडा छुट गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजनीति गर्न र फोटो झुन्ड्याउन मात्र महासंघको नेतृत्वमा नआएको बताएका छन् ।
प्रत्येक नाई श्रमिक (कपाल काट्ने)लाई लकडाउन अवधिभर प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
गीतकार अम्बिका गुरुङको गीत ‘कति माया’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने श्रष्टाहरुलाई विभन्न राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको मध्य सहरमा बग्ने टुकुचा खोलाको संरक्षण गर्ने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन् ।
पार्टीलाई एकतावद्ध राख्नु नै छ । यहाँ कोही राष्ट्रघाती दलाल, कोही महान राष्ट्रवादी भन्ने होइन । हामी सबै मिलेरै नाकाबन्दीको सामना गरेको हो । हामी सबै मिलेरै नक्सा बनाएको हो । के राष्ट्रवाद जिन्दावाद र मूर्दावादको कुरा हो ? पार्टीभित्र जिन्दावाद र मूर्दावाद भन्ने कुरा हो त ?
भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन र छोरा अभिषेक बच्चनलाई कोरोना संक्रमण भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै अभिनेता अनुपम खेरको परिवारमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले प्रदर्शन गरेको छ ।
कोरोनाको कहर : बन्न थाल्यो 'मास्क परौठा', ग्राहक बढेपछि थप्नु पर्‍याे कामदार (भिडियोसहित)
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि संसारभर विभिन्न उपायको अवलम्वन गरिएको छ । जनचेतना फैलाउनका लागि पनि विभिन्न तरिकाका सामग्री तयार गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको उद्दार र राहतमा जुट्न आव्हान गरेका छन् । देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्र देखिएको विवाद आन्तरिक मामिला भएकाले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरुको उद्दार तथा राहतमा जुट्न आव्हान गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना भाइरसको महामारी र पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादमा केन्द्रित रहेको छ ।
झण्डै डेढ दर्जन लोकगीत गाइसकेका लोकगायक खेम भण्डारीले तीज गीतको विषयवस्तुलाई समेटेर नयाँ गीत ‘घिन्की पकनी’ ल्याएका छन् ।
सिन्धुली अस्पतालभित्र एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र छ । २०१७ बाट लैङ्गिक हिंसामा परेका पुरुष, महिला, बालबालिका र वृद्धलाई कानुनी (मानसिक सबै किसिमका हिंसा जन्य घटनामा यो ठाउँ) बाट परामर्श सेवा दिइँदै आएको छ ।
म्याग्दी सदरमुकाम बेनीलाई मुस्ताङको जोमसोमसँग जोड्ने बेलीव्रिज बाढीले बगाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विभिन्न जिल्लामा थप १ सय ८ जनासहित देशभर संक्रमितको संख्या १६ हजार ५ सय ३१ पुगेको जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षण शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरीको बर्दीमा दाग लगाउने कोसिस गरे निर्मम रुपमा कारवाही गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको नवनियुक्त महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरेका छन् । गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले थापालाई गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् ।
सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका कमला नदीमा बनाइएको सडक पुल तोकिएको समयअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरुले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
कुसुम गुरुङको नेपाल प्रहरीको कर्तव्यबोधसँग सम्बन्धित गीत सार्वजनिक भएको छ ।
एजेन्सी । यो कुनै जुरासिक पार्कको दृष्य होइन । यो अमेरिकाका बास्केटबल खेलाडी रेक्स च्यापमेनले आफ्नो ट्वीटरमा अपलोड गरेको भिडियो हो । उनले क्याप्सनमा यदी एक पंक्षीलाई सार्कसँगै उड्दै गरेको देख्नुभउको छैन भने समुद्रबाट बाहिरिँदै गरेको यो दृष्य हेर्नुहोस् भनेर लेखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का नेताहरुलाई थर्काएका छन् । नेविसंघले शुक्रबार पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६औं जन्मजयन्तीमा शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा देउवाले सार्वजनिक रुपमा नै थर्काएका हुन् ।
युवाहरुको समुहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्लेम गेम र प्रोक्सी वारको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सुझाव दिएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु भएसँगै नेताहरु सदनमा जानुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको परामर्शमा आफू निकट मन्त्री र स्थायी कमिटी सदस्यलाई बोलाइएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमै, यस्तो छ परिमार्जित कार्यतालिका
नेपाली कांग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीको चौथो दिनको बैठक सम्पन्न : के-के भयो बैठकमा ? (भिडियोसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपा एमाले नामको नयाँ दल दर्ता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिमा छलफल भएको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण : संक्रमितको संख्या १३,५६४ पुग्यो (भिडियोसहित)
सिंहदरवारभित्रै कर्मचारी आन्दोलित, ‘माननीयज्यू, नासुका आँशु देख्नुभएन ?’
संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरु नसमेटिएको भन्दै निजामति कर्मचारीहरुले सिंहदरवारभित्रै आन्दोलन गरेका छन् ।
मेसिनले धान रोप्न उदयपुर आएका कृषिमन्त्री छोएर फर्फिए, चलेन मेसिन (भिडियो)
धान रोप्ने मेसिन (राइस ट्रान्सप्लान्टर) ले धान रोपेर चक्लाबन्दी खेतीको उद्घाटन गर्न आएका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल छोएर फर्केका छन् ।